Emulator sy lalao style Retro ao amin'ny Ubuntu mampiasa fonosana haingana | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ireo lalao maoderina Retro sy emulator isika. Afaka mametraka azy ireo amin'ny Ubuntu izahay noho ny fanangonana fonosana snap tsy mitsaha-mitombo. Amin'izao fotoana izao, ny fahafahanao mandany ora mahafinaritra eo alohan'ny PC dia tsy mila CPU lehibe intsony, na zavatra toy izany. Misy ny fitsanganana indray emulator sy lalao fomba Retro amin'izao fotoana izao.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hijery lalao kely misy aingam-panahy ho an'ny rehetra hilalao sy hifalifaly isika. Ireo lalao sy emulator ireo dia azo ampiasaina amin'ny rafitra fiasa mamela anao mametaka fonosana haingana.
1 Lalao style Retro ho an'ny Ubuntu
1.8 afo rpg
Lalao style Retro ho an'ny Ubuntu
OpenRA dia a maotera lalao tetika tena izy. Ity dia tetik'asa maimaimpoana, loharano misokatra ary sehatra sehatra hafa izay mamerina mamorona sy manavao ny lalao tetika mahazatra Command & Conquer.
Afaka mahita OpenRA ao amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana ny terminal (Ctrl + Alt + T) sy ny fanoratana:
Raha mila mametraka OpenRA amin'ny alàlan'ny tahiry, azontsika atao ny manaraka ny torolàlana momba ny fametrahana an'io lahatsoratra.
Ny motera SCUMM dia nampiasaina hamoronana lalao traikefa nahafinaritra mandritra ny 30 taona mahery. SCUMMVM dia mamela anao hilalao azy ireo amin'ny milina Gnu / Linux. Lalao 200 mahery no tohana, ao anatin'izany ny King's Quest, Police Quest, ary Monkey Island. Misy lalao ho an'ny tsiro rehetra.
Afaka mahita ScummVM ao amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary manorata ao aminy:
Manda Dwarf iray fananganana sy fitantanana simulasi. Tsy maintsy manangana trano mimanda isika ary handeha hanao traikefa nahafinaritra amin'ny tontolo marobe.
Azontsika atao ny mahita Dwarf Fortress avy amin'ny fivarotana haingana na manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manorata ao:
Izy io dia emulator novolavolaina 20 taona mahery lasa izay. MAME dia tetikasa loharano misokatra. Hamela antsika milalaova ny lalao arcade ankafizinay ao amin'ny ekipanay Ubuntu. Mila mampiditra ny ROM mifandraika aminy fotsiny izahay, ary milalao.
Ho hitantsika ny kinova MAME farany indrindra ao amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary manorata ao aminy:
Afaka manao izany isika manao karazana fametrahana hafa manaraka ny torolalana manaraka lahatsoratra.
Navoaka voalohany ho shareware tamin'ny 1996, Quake kilasika izay nanohy ny lalana natombok'i Doom.
Ho hitantsika ny Horohoron-tany (Shareware) ao amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary manorata ao aminy:
Un lalao pixelart izay tsy maintsy mihazakazaka nefa tsy tratran'ny maso ratsy. Ity lalao ity no vokatra novolavolain'ny ekipa VACAROXA.
Afaka mahita CodenameLT ao amin'ny fivarotana haingana na sokafy ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary soraty ao:
Wolfenstein & Doom dia nanome aingam-panahy ho an'ny mpamorona lalao hamorona tontolo 3D izay hitifirana havia sy havanana. WolfenDoom dia mitondra an'ity amin'ny ambaratonga manaraka a FPS aingam-panahy avy Wolfenstein 3D, Medal of Honor and Call of Duty.
Manana WolfenDoom: Blade of Agony azo jerena ao amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary manorata ao aminy:
Flare dia a 2D action RPG loharano misokatra. Miaraka amin'ny fomba fijery isometrika, i Flare dia mampatsiahy an'i Diablo, 20 taona lasa.
Afaka mahita Flare RPG avy amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana ny terminal (Ctrl + Alt + T) sy ny fanoratana:
Amin'ny efa ho 7 taona, Minecraft tena tsy tokony hatao hoe lalao 'Retro'. Na izany aza, maro ny zaza 12 taona no mety tsy hanaiky izany. Ny Minecraft dia afaka mandany ora tsy miankina na faran'ny herinandro iray manontolo rehefa manangona loharano sy manangana ny tontolonao manokana ianao.
Ho hitantsika ny Minecraft avy amin'ny fivarotana haingana na apetrakao amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary soraty ao:
Azonao atao apetraho ity lalao ity amin'ny alàlan'ny fomba fametrahana hafa, manaraka ny torolalana amin'ity lahatsoratra.
Aza avela hanadala olona ilay anarana! Minetest dia a Loharano misokatra ary lalao fomba Minecraft azo ovaina tokoa miaraka amin'ny maody famoronana, fanohanana marobe, hazavana mavitrika ary tontolo tsy manam-petra hijerena sy hananganana.
Afaka mahita Minetest ao amin'ny fivarotana haingana na amin'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary manorata ao aminy:
Afaka mahita fomba fametrahana hafa ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Quadrapassel dia derivative iray amin'ny lalao rosiana midina Block mahazatra. Tadiavo sy ahodino ireo sakana rehefa lavo izy ireo, ary andramo atao ny mampifanaraka azy ireo. Raha mitady fanamby ianao, Quadrapassel dia mamela anao hampitombo ny hafainganam-pandeha voalohany na hanomboka ny lalao amin'ny sakana ampahany amin'ny sasany amin'ireo laharana.
Ho hitantsika ny Quadrapassel ao amin'ny fivarotana haingana na apetrakao amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary soraty ao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ireo emulator sy lalao amin'ny fomba Retro ao amin'ny Ubuntu mampiasa fonosana haingana
Eric: Tontolo iainana fampandrosoana mitambatra ho an'i Python sy i Ruby
AltYo, fantsona midina midina tsara ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives